Meelaha Ugufiican ee Laga Helo Sawirro PNG oo hufan | Abuurista khadka tooska ah
Meelaha Ugu Fiican ee Laga Helo Sawirada Transparent PNG
Jorge Neira | | Sawirro, Khayraadka
Sida qalabka naqshadeynta garaafka ku saleysan biraawsarka Ku kasbashada caan ka mid ah hiwaayaddayaasha iyo naqshadeeyayaasha xirfadleyda ah, waxaa jira baahi weyn oo loo qabo sawirrada PNG hufan oo diyaar ah. Raster software design sida Photoshop iyo kuwa kale ee bilaashka ah (GIMP iyo Pixlr) waxay kaa caawin karaan inaad la socoto oo si fudud u jar qaybaha aan loo baahnayn ee sawirka oo hel sawir hufan.
Marka ururinta kheyraadka maanta waxaan awoodi doonnaa inaan aragno dhowr maktabadood oo sawirro png hufan ay ku jiraan farshaxan yar oo bilaash ah iyo walxo lagu sharraxay Premium 3D, taas oo kuu fududeyn doonta khibradaada naqshadeynta, gaar ahaan haddii aad ku shaqeyso aaladaha naqshadeynta websaydhka.
1 Meelaha laga helo sawirada PNG hufan
1.1 Ku dhaji PNG
1.2 Pixel Squid
1.5 PNG Dhammaan
1.7 Bilaash PNG Img
Meelaha laga helo sawirada PNG hufan
Ku dhaji PNG
Ku dhaji PNG waa maktabad sawirada PNG ku saleysan bulshada. Boggu wuxuu ka kooban yahay in ka badan 13.000 sawir hufan PNG oo loo kala saaray in ka badan 1850 qaybood oo isugu jira xayawaanno, filimo iyo dad caan ah, illaa cuntada, qalabka guryaha, isboortiga iyo waxyaabo kale oo badan.
Tan iyo aasaaskeedii Nofeembar 2016, Stick PNG wuxuu ku guuleystey inuu helo dad badan oo raacsan naqshadeeyayaasha, YouTubers iyo curinta kale kuwaas oo adeegsada waxna ku darsada barta. Sawirro iyo qeybaha cusub ayaa lagudarsadaa maalin kasta waxaana goobta laga rajeynayaa xoogaa horumar ah oo layaableh bilaha soo socda, oo ay kujiraan luuqado badan oo Isbaanish, Faransiis, Jarmal iyo Ruush ah.
PixelSquid waa a Kaydso maktabadda sawirka leh walxaha 3D la siiyay taas oo ka duwan wax kasta oo aad waligaa hore u aragtay.
Sawirada Transparent PNG Object si fudud ayaa loo soo gelin karaa Photoshop iyadoo la adeegsanayo fiilo khaas ah oo u oggolaaneysa deg deg deg deg ah oo hoos u dhac iyo isku shaandheyn la'aan dadaalka ayaa u rogaya walxaha 3D adduunka laba-geesoodka ah ee Photoshop. Waxyaabaha waxay u yimaadaan sidii PNGs hufan iyo faylalka lakabyada PSD oo leh milicsiga hagaajin kara, dhalaal, hooskii, iyo inbadan.
PNG Img waa ururinta khadka tooska ah ee sawirada 'PNG' hufan oo bilaash ah Waxay ka koobantahay in ka badan 19.000 oo sawirro PNG oo bilaash ah buuggaaga.
Boggu wuxuu leeyahay kala soocid taxaddar leh oo ay ku jiraan 26 qaybood oo waaweyn iyo qaybo hoosaadyo aan tiro lahayn oo u oggolaanaya marin fudud. Sawirada PNG ee hufan ee ku jira PNG Img waxaa loo isticmaali karaa oo keliya ujeedooyin shaqsiyadeed iyo kuwa aan ganacsi ahayn.
Sawirka quduuska ah ee sawirada bilaashka ah, Waxay kakoobantahay in kabadan 880.000 oo sawirro bilaash ah, vektor iyo sawir gacmeedyo, oo ay ku jiraan sawirrada PNG hufan.
Iyadoo ay ka sarreeyaan 1500 + faylalka 'PNG' bilaash ah iyo in ka badan oo maalin kasta lagu daro bulshada hal abuurka leh ee sawir qaadayaasha, Pixabay ayaa si dhakhso leh u noqonaysa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga helo sawirro hufan oo bilaash ah. Faa'iidada weyn ee maktabadda sawirka Pixabay ayaa ah nidaamka shaandhaynta faylka ee horumarsan taas oo u oggolaaneysa isticmaaleyaasha inay doortaan feylal ku saleysan nooca, jahaynta, nooca, cabbirka, iyo midabkooda.
Sawirro bilaash ah iyo sawirro PNG ah oo ku yaal Pixabay waxay u qaybsan yihiin 20 qaybood oo waaweyn, oo ay ka mid yihiin dabeecadda, cuntada, ganacsiga, farshaxanka iyo waxyaabo kale oo badan.
PNG Dhammaan waa maktabad sawirro hufan oo ku jira PNG iyo baloog ku dadaalaya inuu siiyo naqshadeeyayaasha ilaha ugu dambeeya ee warshadaha.
Goobta hadda waxaa ku jira 1125 sawirro hufan oo PGN ah, halkaas oo dhammaan sawirada goobta laga heli karo oo keliya isticmaalka shakhsiga ah, markaa haddii aad raadineyso sawirrada PNG ee mashruuc ganacsi, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad meelo kale ka raadsato. Si kastaba ha noqotee, goobtu waa meel fiican oo laga helo sawirada PNG oo bilaash ah iyo clipart loogu talagalay mashaariicdaada shakhsi ahaaneed.
PNG Pix waa dhammaystir kale oo weyn annaga ururinta websaydhka hufan Kheyraadka PNG.
Goobta Waxay kakoobantahay 5000 sawir oo hufan PNG oo loo kala saaray 23 qaybood. Qeybuhu waxay ka kooban yihiin clipart, dadka caanka ah, dadka, iyo cuntada leh faylalka ugu badan ee loo yaqaan 'png files' oo ah walxaha maalinlaha ah.
Bilaash PNG Img
Bilaash PNG Img Waxay ka koobantahay faylal badan oo muuqaal hufan PNG ah. Dhammaan feylasha sawirku waxay u qaybsan yihiin qaybo kala duwan iyo qaybo-hoosaadyo u oggolaanaya daalacashada fudud iyo shaandhaynta feylasha muuqaalka.
Boggu wuxuu kakooban yahay waxyaabo isticmaale-gudbiye ah iyo sawirro PNG oo gacanta lagu xushay, oo ay kujiraan farshaxan goobeed, astaamo, iyo sawir qaadis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Meelaha Ugu Fiican ee Laga Helo Sawirada Transparent PNG
Photoshop wuxuu adeegsadaa algorithm qarsoodi ah si sawirada lacagta loo furi karin
50 Tusaalooyin InDesign oo bilaash ah